NOOCYADA ENOTERA SII KORDHAYA BEERTA - SOOSAARKA DALAGGA
Enotera - Tani waa ubax dilka ah, kaas oo lagu yaqaan magaciisa labaad, kuwaas oo ah: "habeenkii hore" ama "shumac fiidkii". Warshadu waxay u qalmaan magacyada noocaas oo ay sabab u tahay midabkeeda dahabka ah ee burooyinkeeda iyo ubaxyada badan ee habeenkii.
Ma taqaanaa? Cudurka enotera waxaa ka mid ah tiro badan oo ah sanadlaha, biennial iyo dhirta dhirta dilka ah.
Si aad u daryeesho mucjiso dahab ah maaha mid aad u adag, waxaanan ku caddaynaynaa qodobkan.
Noocyada ugu waaweyn ee maqaarka habeenkii
Waxaa jira qiyaastii 150 nooc oo ah astaamaha habeenkii ah ee dalbanaya ubaxlayaasha. Bannaanka u gaar ah u jilciso noocyada kala duwan ee dhirta: Kareem, Krupnotsvetkovuyu, Bush, Missouri iyo Tetragonal.
Enotera Tani waxay jeceshahay hooska badan. Sidaas booska beerto waa inuu ku jiraa hooska, ama waa inuu jiraa daadad yar oo ku xigta geedka. Enotera Karku wuxuu koraa illaa 1 m oo dherer ah wuxuuna ku habboon yahay ubaxyo kale sababtoo ah koritaankiisa. Ubaxaha maqaarkoodu waa huruud iyo ballaadhan. Gaar ahaan noocan ah xaqiiqda ah in ay ka baxaan burooyinkeeda furan maalinta oo dhan.
Enotera grandiflora ayaa sidoo kale loo yaqaan labo sano. Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee dhaqanka dameeraha oo kora ilaa 2 mitir. Ubax waa huruud cad oo leh caraf udgoon, taas oo si gaar ah loo dareemo habeenkii ama habeenkii.
Ma taqaanaa? Waxay u badan tahay in loo yaqaan 'pisshole' sababta oo ah fiidka habeenkii ah ayaa caleemaha u eg sida dhegaha dameerka.
Warshadani waxay ka duwan tahay noocyada kale ee daroogada ee ah in ay koreyso ilaa 90 cm oo dherer ah waxayna leedahay xoog leh, si fiican u dallacan leh afargeeso jaale ah. Ubaxa wuxuu ubax ka dhigaa ubax soo jiidasho leh, geedi-socodka caanaha, gaar ahaan xilliga dayrta, marka caleemaha warshadu noqdaan dhiig-cas.
Homeland ee noocyada kala duwan - koonfurta of North America. Tani waa geedo culus ah oo gaadhaya ilaa 40 cm oo dherer ah. Kala duwanaanta noocaas ah ee koritaanka enotera waxay leedahay ubaxyo waaweyn oo gaara ilaa 10 cm dhexroor. Qaabka ubaxa waxay u eg yihiin koobab. Enotera missouri waa wax aan caadi aheyn oo ah in uu ubaxyada oo dhan kuleylayo ilaa inta uu barafoobayo. Carafku waa u jilicsan yahay wuxuuna ku siinayaa qoraalka citrus.
Homeland ee noocyada dhirta this waa bari u ah Waqooyiga Ameerika. Quadrangular quotune wuxuu u koraa illaa 70 cm oo dhererkeedu sarreeyaa wuxuuna ku leeyahay dhererka qiyaas ahaan qiyaas ahaan 45 cm, kuwaasi waa dhirta u dhaxeysa barafka oo soo saara iyada oo qaybinaysa baadiyaha. Geedka ubaxu wuxuu tetrahedral ka bilaabo Juun ilaa August.
Noocyada ciribtirka iyo soo saaridda ciriiriga
Qorshaha saliida habeenkii ma noqon doonto mid ku adag ubaxlayaasha, iyo sidoo kale daryeelida warshad. Waxay ka timaadaa abuurka nolosha geedka. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto goobta saxda ah ee lagu beerayo abuurka enotera. Waan ka hadli doonaa tan qaybahan soo socda.
Enotera wuxuu jecel yahay meelaha qorraxda, sidaas darteed haddii goobtaadu ku taal dhinaca koonfureed, miraha waxaa si toos ah loogu beeray dhul furan. Kobcinta enoteru ka soo abuur ah ma aha mid aad u fudud, sida dhirta u baahan shuruudaha qaarkood.
Abuurka mooska fiidka ayaa la ururiyaa illaa dhammaadka bisha Sebtembar, laakiin haddii ninkii beerta ka shaqeeyaa sababo aan sidaa u sameynin, ka dibna quraanku waxay si fudud ugu faafinayaan agagaarka goobta.
Waa muhiim! Enotera uma dulqaadan karo qoyaan joogta ah, sidaa daraadeed meesha ugu fiican ee beerto waxay noqon doontaa dhoobo iyo carrada ciidda.
Isla markiiba ka hor beerto abuurka ah, ciidda waa in la bacrimiyo leh dharka foornada ugu sareeya iyo humus. Qodobka beeritaanka waxaa lagu qodaa hal shasale oo si qoto dheer u waraabiyo. Seeds lagu beeray qoto dheer oo ah 3 cm oo daboolay ciidda.
Beeridda geedo cayilan
Enotera waxaa lagu beeray isla markiiba dhulka hoostiisa, laakiin bannaanka qaar baa Gagaab u abuuri kara geedo hore. Tani waa qeexitaan dheeraad ah, tan iyo ubax ee dhirta dhacdaa sanadka ugu horeeya ka dib markii laga beerto.
Tani, ubaxlayaashu waxay abuuraan abuurka dheryaha oo leh peat bishii Febraayo. Ku dabool dheriga filimka ka hor caleemaha ugu horeeya. Markaas filimka waa in laga saaro oo u waraabiyaa si dhexdhexaad ah ilaa geedka uu leeyahay 5-6 caleemo. Geedo noocan oo kale ah waxay ku dhuftaan dhul furan ugu horeyntii May. Qoto dheer ee godadka loo beerto waa inay ahaataa ugu yaraan 50 cm. Fogaanta u dhexaysa geedaha ciriiriga waa inay ahaataa 60 cm Ka dib markii la beero, ciidda ayaa qoyan.
Ma taqaanaa? Enotera waa mid ka mid ah dhirta oo habeenkii xagaaga soo celin kara sheeko qurxoon.
Koraaya warshadani kuma koobna abuurka. Waxaad isticmaali kartaa habkan, sida qaybta baadiyaha. Bishii Maajo ama horraantii Sebtembar, ayaa duurka u kala qaybsan yihiin delenki oo loo beddelaa meel cusub. Asal ahaan dooro xididada isdabajoogga leh ee kor u kaca.
Waxaad celin kartaa inta lagu jiro xilliga xagaaga, xitaa inta lagu jiro ubax. Geedaha waa mid xoog leh waxayna ilaalin karaan muuqaalkooda iyaga oo aan biyo iyo ciid u aheyn dhawr maalmood. Qalitaanka ka dib, xididdadu si fiican ayay u qaadaan oo u dhaqaan si deg deg ah.
Waa muhiim! Ha ku soo celinin geedka marxaladda kulaylaha xagaaga, maaddaama geedkii fiidku qallajin karo.
Isku dhafka subaxdii iyo dhir kale
Tan iyo markii cayayaanka fiidka ah uu leeyahay xididada aad u xoogan oo si dhaqso ah u kora, ubaxyada ayaa sababi kara cillado dhirta qaarkood haddii lagu beeray masaafada u baahnayd.
Enotera si quruxsan oo isku dheelitiranna u eega beeritaanka kooxda. Noocyo sarreeya waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican oo ka soo jeeda asalka, iyo hoosta waxaad u qabanqaabin kartaa dawannada ama daylooyinka.
Haddii aad leedahay noocyo yar oo qalooc ah, waxaad ku beeran kartaa buuraha alpine leh lobelia.
Sida loo daryeeli karo ujuurada goobta
Ka dib markii la beerto, salalka maqaarku wuxuu u baahan yahay geedka si fiican loo daryeelo.
Enotera ma jecla joojinta joogtada ah ee biyaha ee xididdada, taas oo horseedaysa burburka iyo dhimashada ubaxa. Ubax waa la waraabiyaa inta lagu jiro xilliyada xagaaga kulul oo qallalan ee xilliga xagaaga, sida waqtigaan dhulku u engegay. Dhirta dhallinyaradu waxay u baahan yihiin waraabin badan oo soo noqnoqota.
Sannad kowaad, enotera uma baahna bacriminta, maadaama substrate nafaqo hore loogu darey ciidda ka hor beerashada. Sannadaha soo socda nolosha dhirta waa in la dhalaaliyaa. Inta lagu jiro ubax firfircoon iyo koritaanka, potassium sulfate iyo ash qoryaha ayaa lagu daray dharka ugu sareeya.
Sidoo kale, ciidda ka yar warshadda waa in si joogto ah loo furo. Waxay quudinaysaa dhulka oo leh oxygen. Waxa kale oo muhiim ah in laga saaro caws, maxaa yeelay waxay joojin karaan kobcinta dhirta.
Ma taqaanaa? Fiidkii subaxdii saliida waxay hagaajinaysaa fayoobaanta haweenka maalmaha muhiimka ah, waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta qaabka jidhka, waxay yareyneysaa dufanka baruurta ee unugyada.
Hawlaha xilliga dayrta iyo fiidkii xilliga jiilaalka
Manjooyin caleenta ah ayaa la sameeyaa hal mar, dayrta, tan iyo dhammaan qaybaha kor ku xusan ee ubaxa waa la gooyaa heer ciid ah.
Warshadu waa baraf u-adkaysi uuna u baahnayn hoy adag oo loogu talagalay jiilaalka. Ka dib markaad googooto foosto fiidkii, waxay noqon doontaa mid ku filan inaad dhulka ku darto ilaa 5 cm sare. Peat ama compost waxaa loo isticmaalaa ilaalin. Sannadka kowaad, dhirta dhallinyaradu waxay ku yaalaan lapniknik. Kaararka Enotera oo aan lahayn wax dhibaato ah oo aan macquul ahayn uma baahna daryeel muddadaas.
Cadaadis u fidinta cudur faafka ah
Koritaanka iyo daryeellaha enotherot-ka ma keeno wax dhibaato ah. Laakiin kuwani ma aha dhirta kaliya ee ubax. Waxa kale oo ay ka soo horjeesatay inay iska caabiso cudurada iyo cayayaanka. Iyadoo daryeel aan yareyn, laguma arkayo dulin, laakiin waxaa jira hal cudur oo saameyn kara dhirtaada.
Macmacaanka macaanka - Waa cudur fungal ah oo muujiya lafaha dhalinyarada. Noocyada budada cad ayaa ka muuqda caleemaha, caleemaha iyo burooyinkeeda. Muddo ka dib, lakabaadku wuxuu si tartiib tartiib ah u madoobaa, iyo unugyada ay saameeyeen waxay noqonayaan bunni. Caleemaha waa la bedelay oo qalalan. Buds qalalan, oo aan shaaca ka qaaday.
Ka hor inta ubax maqaarkii foosto, daawee si looga hortago kaniiniga kolloollada. Calaamadaha ugu horreeya ee cudurka, ku dhaq caleemaha xal xal oo soodhada iyo saabuun. Haddii aad ku kalsoon tahay kiimikooyin badan, waxaad isticmaali kartaa daroogooyinka sida Scor iyo Horus.
Ma taqaanaa? Caleemaha asxaabta fiidka waxaa ku jira xaddi badan oo sonkor ah, istaarijin iyo inulin, caleemaha ayaa hodan ku ah fitamiin C, waxay sidoo kale leeyihiin qadar yar oo ah fitamiin A on P.
Enotera waa warshad qurux badan oo sidoo kale aan qabyo ahayn si loo daryeelo. Haddii aad go'aansato inaad qurxisaan cawska leh ubaxyo qurux badan oo jaale ah, warshadani waxay ku habboon tahay abuurista qaybo xiiso leh.